Abuuritaanka xirmooyinka .deb oo leh Checkinstall | Laga soo bilaabo Linux
Abuuritaanka xirmooyinka .deb oo leh Checkinstall
auroszx | | Aplicaciones, GNU / Linux, Barnaamijka, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan ka mid ahay kuwa badan oo qasab ku noqotay soo ururi nooc cusub ama dalab qaar taas oo aan ku jirin keydadkaaga, dhibaatada tan ayaa ah taas markii la ururinayo galka dalabka keydi maktabadahaaga iyo faylasha kale galka aad ku uruurisay, iyo hadaan cusboonaysiinno xirmada u eg Basura ama haddii aan tirtirno galka arjiga mar dambe ma shaqeyso. "Waxaa la doorbidaa in la abuuro xirmo oo rakibo«, Haa, laakiin kuligeen iskuma wanaagsana dhigi, marka waan kuu soo bandhigayaa Jeclow, kaas oo u yimaada fududaynta hawsha.
Waa hagaag, Jeclow waa wax aan ka yara badnayn saaxir halkii terminal si loo abuuro xirmooyinka .deb. Marka waan awoodnaa uruuri oo samee xirmo , tusaale ahaan, u dir saaxiibbadeen.
Si aan ugu bilaabo, waa inaan ku rakib jeexjeex. Sidaas ayaan samaynaynaaxidid ahaan):
Isla daqiiqadana waanu rakibi doonaa ... Waxa xiga waa inaan aadno galka kaas oo aan ku leenahay lambarka dalabka, oo aan ku fureyno a terminal. Waxaan fulinaa amarrada soo socda, mid mid:
Iyadoo "./configureBaakadaha loogu talagalay qaybintayada ayaa loo qaabeeyey iyo «Makefile"(feyl ka kooban tilmaamaha isku-duwidda), iyo "dhigi»Aruurinta koodhka oo ka tag khaanadaha, maktabadaha, iwm galka«src«. Hadda, ka hor intaadan sii wadin, waa lagugula talinayaa ma rakibin codsiga xirmada laga sameyn doono. Hadday tahay, samee a:
Ka dibna waa waqtigii la bilaabi lahaa qaybta muhiimka ah, isticmaalka Jeclow. Isla terminaalka, waxaan ku qoreynaa:
Iyo «kaaliyaha'ah Jeclow. Dhexdeeda ayaan wax ka beddeli karnaa macluumaad kaas oo yeelan doona xirmada aan abuuri doono. Fursadaha aan wax ka beddeli karno waa:
Daryeelka- Soosaaraha ugu weyn ee xirmada.
Summary: sharaxaad ku saabsan xirmada.
magaca: sheeg magaca aad rabto inaad siiso xirmada.
Nooca: nooca xirmada.
Release: Waa nooca ugu weyn ee xirmada, waanu uga tagi karnaa kolba hadduu yimaado.
License: liisanka dalabka, waxaa la doorbidaa inaadan taaban.
Group: koox loo abuuray, waxaan uga tagi karnaa sida ay tahay.
naqshadaha: xirmo naqshadeeye processor.
Goobta laga soo xigtay: magaca galka (kaliya galka, maahan wadada oo dhan) halka summada xirmada ay taallo.
Meel kale oo laga heli karo: looma baahna in wax laga beddelo.
Waxaa loo baahan yahay: ku tiirsanaanta ay tahay in lagu rakibo hawlgalkooda saxda ah.
Waxay bixisaa: Magaca xirmada ay bixiso, muhiim maahan in wax laga beddelo.
khilaafaadka: baakado ay isku dhacaan.
Bedelaya: baakado ay bedesho.
Abuuritaanka xirmo .deb oo leh Checkinstall.
Sida aad u aragto, waxaan haysannaa tiro badan oo xulashooyin ah oo aan wax ka beddelayno. Mid waliba wuxuu leeyahay lambar bidixdaada, si aad wax uga beddesho oo keliya waxaan qornaa lambarkaaga waanan cadaadinaynaa [Ku qor]. Kuwa aan inta badan wax ka beddelo waa: Daryeelka, Summary, magaca, Version, iyo laga yaabee Waxaa loo baahan yahay.
Marka aan wax ka beddelno waxa aan dooneyno, waxaan riixnaa [Ku qor] (iyadoo aan lahayn lambar hore) wuuna bilaabi doonaa uruuri oo rakib xirmada. Markii ay dhammaato, galka aan ku uruurinay ayaa ka muuqan lahaa a .deb xirmo codsiga, diyaar u ah inuu rakibo 😉
Hubso inaan ogahay taas «Version« maya warqado leeyihiin. Tani waxay badanaa ka hortagtaa xirmada in la abuuro.
Waa macquul in haddii aad wax ka beddesho «Waxaa loo baahan yahay»Sii guul darrooyin, haddii ay dhacdo ka tag booska madhan.
Hagaag, hada cudur daar uma haysid inaadan abuurin baakado .deb kuu gaar ah. Oo ii sheeg Caadi ahaan ma u sameysaa baakado loogu talagalay mashiinkaaga 'distro'? Sidee badanaa ugu abuurtaa xirmo qaybinta aad isticmaasho? Waan xiiseynayaa 😛
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Abuuritaanka xirmooyinka .deb oo leh Checkinstall
Kaliya sixid yar. Halka ay ku qoran tahay in sameynta ay tahay in la abuuro Makefile waa khalad, faylka la yiri waxaa la abuuray iyadoo si guul leh loo fulinayo ./configure, kaas oo hubiya qaabkeena iyo sidoo kale ku tiirsanaanta barnaamijku u baahan yahay inuu soo uruuriyo. Samee qaadataa feylashaan oo isku duba rido ka tagista labada dhinac, maktabadaha iyo kuwa kale ee ku jira tusaha gudaha src Samee rakib waa kan u dira nidaamka una abuura xiriiriyeyaasha, sababtaa awgeed samee rakibidda waa in loo fuliyaa sida su.
Aad baad ugu mahadsantahay cadeynta, sixida maqaalka.
Qumman ayaa ii yimaada 🙂
Weligay waxaan u sameeyay .deb Debian-kayga, sida kiiska SMPlayer 0.8.0 kaas oo ku jira baakadka asalka horeyba ula yimid qoraal lagu sameeyo sidaa darteed waxba ma aanan qaban, kaliya qor qoraalka xDD
Had iyo jeer waxaan xirxiraa softiweerka Pardus maxaa yeelay PardusLife waxaan ku leenahay repo yar oo beesheena 😉
Caadi ahaan waxaan ka soo qaataa barnaamijka GUI ee la yiraahdo PiSiDo, in kasta oo aan muddooyinkan dambe aad u isticmaalo terminal-ka. Halkan waxaan ku sameeyay fiidiyow-cashar ku saabsan sida loo rakibo PiSiDo ee Pardus 😉
Waxaan sidoo kale isticmaalaa hubinta walxaha, in kasta oo aan isku dayay qalab GUI ah oo aan haba yaraatee xumaanayn (sida Debreate).
Marwalba waxaan isticmaalaa hubinta jeexjeexa, in kabadan waxkasta, maxaa yeelay markaan abuurayo oo aan rakibayo .deb, markaa waa laga fogaan karaa karti ama synaptik.
Intaas waxaa sii dheer, waad badbaadin kartaa mar walba xirmada haddii ay dhacdo inaad mustaqbalka dib u rakibto ama aad u gudbiso saaxiibkiis.
Xiiso leh inkasta oo aanan waligey ku qasbanayn inaan uruuriyo debian waxaan arki doonaa haddii aanan helin deyn lmms waxaan ku sameyn doonaa iyadoo la hubinayo hubin aamin ah.
Waad ku mahadsan tahay boostada.
Kama warqabin CheckInstall. Aad baad u mahadsantahay AurosZx. Ma aqaan sida aan u ahaan lahaa la’aantiis illaa iyo hadda.
Kaliya waxaan ku tijaabiyay MovGrab, oo aanan ku haysan Debian oo aan ka soo ururiyey ilaha. Nasiib darrose waxay ahayd goor dambe in sudo laga dhigo uninstall.
Hada laga bilaabo markasta waan isticmaali doonaa.
Mararka qaarkood baakadaha lagu abuuray Checkinstall, markii la rakibo, ha abuurin wax laga soo galo menu-ka, taas oo ah, waxaad rakibtaa xoogaa program.deb ah ka dibna waxaad aadeysaa inaad ka raadiso arjiga miiska mana muuqato, xalka tan waa in gacan lagu abuuro.
Waxaan u isticmaalaa Checkinstall si aan ugu xidho Sawir, sawir qaade lagu sameeyay Qt ^^
Conosco Photo waa mashruuc aad u xiiso badan, oo sifiican ula muuqan doona RazorQt 🙂
Proba limoo tmb, waxay lamid tahay sawirka. Waa mid ka mid ah kuwa horumariya boqortooyooyinka silikooniga ah
Mawduuc noocee ah ayaa la adeegsanayaa?
GTK (2 iyo 3): Zukitwo. Windows: hoose. Guddi: Sawir la socda mowduuca Zukitwo 😛
Ka qayb qaadasho wanaagsan, hambalyo
Ku jawaab molocoize
Wanaagsan, waan isku dayi doonaa barnaamijkan, waxaan halkaas u isticmaali jiray sameynta .deb ee aan u baahnaa.
U jawaab Achiim
Aad u xiiso badan, waan ku xisaabtami doonaa, waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta.
Waad ku mahadsantahay tabarucaada, waxaan rabaa inaan bilaabo sameynta xirmooyinkeyga tanina wax weyn ayey ii tari doontaa. Mahadsanid!
Had iyo jeer waxaan ku abuuraa baakado khamri leh jebin
Ku jawaab cr1ogen
Laba goobood oo waaweyn si aad u hesho noocyo bilaash ah
Sida loogu badalo badhanka Firefox badhan